Firefox 88 biara na ndozi maka onye nlele PDF, Linux, HTTP / 3 na ndị ọzọ | Site na Linux
Firefox 88 biara na ndozi maka onye nlele PDF, Linux, HTTP / 3 na ndị ọzọ
Fewbọchị ole na ole gara aga ka ekwuputara ọkwa ọhụrụ nke Firefox 88 nke emeela ọtụtụ ndozi ọ bụghị naanị maka ihe nchọgharị ahụ, mana a na-agbakwunye nkwado dị mkpa maka Linux, yana maka usoro HTTP / 3 ọhụrụ.
Na mgbakwunye na ihe ọhụrụ na ndozi ahụhụ, Firefox 88 edozila nsogbu 17, nke 9 na-akara dị ka ihe dị ize ndụ, nsogbu 5 na-akpata nsogbu ncheta, dịka njupụta na nchekwa na ịnweta ebe nchekwa echetarala.
1 Main atụmatụ ọhụrụ nke Firefox 88
2 Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 88 ọhụrụ na Linux?
Main atụmatụ ọhụrụ nke Firefox 88
Mgbanwe ọzọ anyị nwere ike ịchọta na Firefox 88 bụ a mgbochi ọhụrụ na ike nke ngosipụta nke arịrịọ maka ikike iji nweta igwe okwu na igwefoto. Agaghị egosipụta arịrịọ ndị a ma ọ bụrụ na 50 sekọnd gara aga onye ọrụ ahụ enyelarị ohere ịnweta otu ngwaọrụ ahụ, maka otu saịtị ahụ na otu taabụ.
Banyere mgbanwe nke Linux, anyị nwere ike ịchọta nke ahụ agbakwunyere nkwado maka mmetụ ogwe aka emetụtara na gburugburu ebe obibi WaylandNa mgbakwunye, mgbe a malitere Firefox na gburugburu Xfce na KDE, ojiji nke WebRender mejupụtara engine na-arụ ọrụ.
A na-atụ anya na Firefox 89 gụnyere WebRender maka ndị ọrụ Linux ndị ọzọ niile, tinyere nsụgharị niile nke Mesa na sistemụ nwere ndị ọkwọ ụgbọala NVIDIA (na mbụ, webRender nyere naanị GNOME na ndị ọkwọ ụgbọ ala Intel na AMD).
N'aka nke ọzọ, a kọwara ya na Firefox 88 Ọ malitela na ntinye na usoro nke usoro HTTP / 3 na QUIC. Na mbu, nkwado maka HTTP / 3 ga-arụ ọrụ maka naanị pasent ole na ole nke ndị ọrụ ma ọ bụrụ na enweghị nsogbu a na-atụghị anya ya, ọ ga-adịrị mmadụ niile na njedebe nke Mee.
Nkwado FTP nwere nkwarụ site na ndabara. Atọrọ ntọala network.ftp.enabled ka ọ bụrụ ụgha site na ndabara, ma atọrọ ntọala nchọgharịSettings.ftpProtocolEnabled mgbakwunye iji gụọ-naanị. A ga - ewepụ koodu niile metụtara FTP na nsụgharị ọzọ.
Ihe kpatara ya bụ mbelata ihe egwu nke ọgụ ochie, yana akụkọ ihe mere eme nke njirimara na nsogbu mmezi, koodu na nkwado FTP. O kwukwara maka mwepụ nke usoro ogbugba ndu nke na-akwadoghi izo ya ezo, nke anaghị echebe megide mgbanwe na interception nke njem na-agagharị n'oge ọgụ MITM.
Na ngwa ọrụ mmepe weebụ, ngalaba nyocha netwọkụ nwere mgbanwe n'etiti igosipụta nzaghachi HTTP na usoro JSON na agbanweghị agbanwe, nke a na-agbasa nzaghachi na netwọkụ.
La ndabara ntinye nke nkwado maka usoro ihe oyiyi AVIF (Usoro ihe oyiyi AV1), nke na-eji teknụzụ mkpakọ intra-frame si usoro ntinye vidiyo vidiyo nke AV1, egbu oge maka ịhapụ ya n'ọdịnihu. Firefox 89 na-ezubekwa ịnye ntanetị ọrụ onye ọrụ emelitere ma tinye mgbako na ogwe adreesị.
Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 88 ọhụrụ na Linux?
Ugbu a maka ndị bụ ndị ọrụ Fedora ma ọ bụ nkesa ọ bụla ọzọ sitere na ya:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Firefox 88 biara na ndozi maka onye nlele PDF, Linux, HTTP / 3 na ndị ọzọ
Ekele, ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka m, zuru oke, ihe na-adịghị m mma bụ na ha wepụrụ ftp mana ọ bụrụ na ọ bụ maka mmelite.
FOS-P5: ringchọgharị ebe Facebook mepere emepe na - eto eto - Nkebi 5
BTColor: Akwụkwọ obere ederede iji chọọ GNU / Linux mma